10 Dugsiyada Caalamiga ah ee ugu Fiican Switzerland 2022
10 Dugsiyada Caalamiga ah ee ugu Fiican Switzerland
Switzerland waa mid ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu sarreeya ardayda caalamiga ah, taas awgeed, iskuulada caalamiga ah ee ugu wanaagsan Switzerland ayaa lagu sharraxay oo lagaga dooday qoraalkan baloogga si loo fududeeyo gelitaanka ardayda.
Switzerland waa dal ku yaal Yurub oo caan ku ah gobolka buuraleyda ah iyo harooyin badan oo ka dhiga mid ka mid ah xulashooyinka ugu sarreeya barafka iyo socodka. Si la mid ah sida waddan walba loogu yaqaanno waxa ugu fiican ee ay qabtaan, taas oo ah, meelaha xirfadda leh ee ay caanka ku tahay, warshadaha muhiimka ah ee Switzerland waa bangiyada iyo maaliyadda, iyo saacadaha iyo shukulaatada Swiss -ka adduunka oo dhan waa la yaqaan.
Luqadaha rasmiga ah ee Switzerland waa Talyaani, Jarmal, Faransiis, iyo Romansh oo lagaga hadlo meelo kala duwan oo dalka ah. Ingiriisigu waa luuqadda aan caadiga ahayn ee ugu badan oo ay ku hadlaan 45% dadweynaha iyo sida arday ajnabi ah oo ka socda waddan ku hadla Ingiriisiga, ma yeelan doontid dhibaatooyin aad u badan oo la xiriira dadka maxalliga ah.
Switzerland waxay ka mid tahay shanta waddan ee ugu hodansan adduunka oo ugu qaalisan in lagu noolaado taasna waa sababta oo ah ku dhawaad ​​qof kasta oo dalka ku nool waa hantiile. Dhanka nabadgelyada, dalku wuxuu kaloo ka mid yahay meelaha ugu nabdoon Yurub iyo adduunkaba maadaama dadka badankiisu ay yihiin kuwo hodan ah, heerka dembigu aad buu u hooseeyaa.
Ajaanibta u aada Switzerland ujeedooyin waxbarasho waxay ku raaxeysan doonaan amniga uu dalku bixiyo laakiin runtii waa qaali in lagu noolaado gaar ahaan magaalooyinka sida Geneva iyo Zurich. Si kastaba ha noqotee, ardayda ka socota waddamada kale ayaa wali ku soo qulqulaya waddanka sannad walba si ay u sii wataan shahaadooyinka tacliinta ee heerarka waxbarasho ee kala duwan.
Nidaamka waxbarashada ee Switzerland wuxuu caan ku yahay adduunka oo dhan heerarka tacliinta sare, wax-soo-saarka cilmi-baarista oo aad loo tixgeliyo, iyo hababka waxbaridda ee udub-dhexaadka u ah ardayda. Waxbarashadeeda sare waxay raacdaa Hanaanka Bologna kaas oo siiya shahaadooyinka caadiga ah - Bachelor, Masters, iyo Doctorate - si ay u qalin jabiyaan. Shahaadada bachelor -ka waxaa lagu dhammeeyaa saddex sano gudahood, marka laga reebo barnaamijyo gaar ah sida daawo ama farmashiye soconaya ilaa shan ama lix sano.
Shahaadada Masterka waxaa lagu dhammeeyaa hal ama laba sano gudahood oo ah daraasado waqti-buuxa ah halka dhakhtarnimada la dhammaystiray inta u dhexeysa saddex illaa shan sano.
Waxaad ka heli kartaa jaamacadaha dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo bixiya barnaamijyo kala duwan oo dhinacyo kala duwan sida dhaqaalaha, xisaabta, sayniska dabiiciga ah iyo kuwa la adeegsado, bini'aadamnimada, iyo cilmiga bulshada. Dalku wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay bangiyada xagga maaliyadda, sidaa darteed, helitaanka MBA waa waddo waxbarasho oo weyn oo ku siin doonta fursado shaqo oo ballaaran iyo shabakad ganacsi oo ballaaran haddii aad tahay arday caalami ah ama mid gudaha ah.
Intaa waxaa sii dheer, luqadda waxbaridda ee jaamacadaha Switzerland waxay kuxirantahay meesha uu ku yaal dugsiga, taas oo macnaheedu yahay, waxay noqon kartaa Talyaani, Faransiis, ama Jarmal. Dugsi kasta oo aad codsanayso, waa inaad tustaa caddaynta aqoonta luuqadda adigoo qaadanaya imtixaanka ku habboon. Imtixaanka aqoonta luuqadda Talyaaniga waa imtixaanka CILS ama CELI, luqadda Faransiisku waa imtixaanka DELF ama DALF, iyo luuqadda Jarmalka, OSD, TestDaf, ama imtixaanka Goethe Institut.
Haddii aad gasho jaamacad ama barnaamij afkiisa wax lagu baro uu ku qoran yahay Ingiriis, markaa waa inaad qaadataa mid ka mid ah imtixaannada aqoonta luuqadda Ingiriisiga ee sida weyn loo aqoonsan yahay, TOEFL ama IELTS.
1 Waa maxay Iskuulka Caalamiga ah ee Switzerland?
2 Shuruudaha lagu Codsanayo Dugsiyada Caalamiga ah ee Switzerland
3 Iskuulada Caalamiga ah ee ugu Fiican Switzerland
3.1 1. Dugsiga Caalamiga ah ee Montreux (MIS)
3.3 3. Dugsiga Caalamiga ah ee Copperfield
3.4 4. Dugsiga Caalamiga ah ee Academia
3.5 5. College iyo Lycee Saint Charles
3.6 6. Kuliyada Aiglon
3.7 7. Kulliyadda Malvern Switzerland
3.9 9. Dugsiga Hull Zurich
3.10 10. Champittet College
4 Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Iskuulada Caalamiga ah ee Switzerland
Waa maxay Iskuulka Caalamiga ah ee Switzerland?
Dugsi caalami ah oo ku yaal Switzerland waa iskuul kor u qaada waxbarashada caalamiga ah meel caalami ah. Dugsiyadan caalamiga ah ee ku yaal Switzerland badiyaa waxay adeegsadaan manhajyo waxbarasho sida International Baccalaureate, Edexcel, Cambridge Assessment International Education, Manhajka Aasaasiga ah ee Caalamiga ah, ama manhaj qaran oo ka duwan manhajka dugsiga caadiga ah ee Switzerland.
Shuruudaha lagu Codsanayo Dugsiyada Caalamiga ah ee Switzerland
Shuruudaha lagu dalbado dugsiyada caalamiga ah ee Switzerland way ku kala duwan yihiin dugsi ilaa dugsi, barnaamij, iyo heerar waxbarasho. Si kastaba ha ahaatee, waxaan weli awoodnaa inaan bixinno shuruud guud si aan u codsanno dugsiyada caalamiga ah ee Switzerland, la xiriirno dugsiga si aan wax badan uga ogaano shuruudaha barnaamijka gaarka ah.
Shuruudaha laga dalbado dugsiyada caalamiga ah ee Switzerland waa;
Ardayda codsanaysa barnaamijka mastarka ama dhakhtarnimada waa inay dhammaystireen oo ka qaateen shahaadada koowaad ee jaamacadda la aqoonsan yahay ama kulliyadda afarta sano ah.
Daabac saxeexan oo ah foomka dalabkaaga
Laba sawir ama ka badan oo baasaboor ah oo wata nuqulka aqoonsigaaga iyo CV ama Resume
Qoraallada tacliinta rasmiga ah ee jaamacadihii hore ayaa ka soo qaybgalay
Dibloomada dugsiga sare ee kuwa codsanaya barnaamijka shahaadada koowaad
Dhibcaha imtixaanka aqoonta luqadda
Caddaynta bixinta khidmadda dalabka
Qoraal shaqsiyeed iyo waraaqo talo bixin ah
Shahaadooyinka iyo qoraallada aan ku qorneyn Ingiriis, Faransiis, Jarmal, ama Talyaani waa in lagu turjumaa mid ka mid ah afafka laakiin nuqulkii asalka ahaa ayaa sidoo kale la bixin doonaa.
Kuwani waa shuruudaha waxaana laga yaabaa inay u baahdaan waaxyo qaarkood oo aad ka heli karto bogga internetka ee dugsi gaar ah ama waxaad la xiriiri kartaa xafiiska oggolaanshaha dugsiga oo aad codsan kartaa macluumaadka aad u baahan karto. Hadda, iyada oo aan la sii dheereyn, aan galno liiska iskuulada caalamiga ah ee ugu fiican Switzerland.
Iskuulada Caalamiga ah ee ugu Fiican Switzerland
Iskuulada caalamiga ah ee Swiss waxaa lagu aqoonsaday kuwa ugu fiican adduunka oo sumcad ku leh heerarka waxbaridda sare iyo edbin adag, waxaa loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha waxbarasho ee carruurta hore iyo qoysaska caalamiga ah.
Qaar ka mid ah dugsiyada caalamiga ah ayaa bixiya waxbarid laba -luqadle ah ama luqado badan leh, iyo sidoo kale aqoonsi waxbarasho oo caalami ah, taas oo u oggolaanaysa ilmahaaga inuu waxbarashadiisa ku sii wato guriga ama dugsi kale oo caalami ah oo dibadda ah. Waxaa ka mid ah dugsiyada hoose iyo sare, iyo sidoo kale dugsiyada maalinlaha ah iyo kuwa hoyga ah, waxayna bixiyaan habab waxbarasho oo kala duwan sida Montessori iyo Kumon.
Manhajka ka socda adduunka oo dhan, sida kuwa caalamiga ah, Swiss, UK, US, Japanese, German, iyo French waxbarasho ayaa iyagana la bixiyaa. Switzerland waxaa ku yaal dhowr dugsi oo ajnabi ah oo caalami ah, marka lagu daro iskuulada Ingiriiska iyo Mareykanka, kuwaas oo shaqaaleysiiya manhaj ay bixisay maamulka waxbarashada dalka hooyo oo saldhig u ah waxbarashadooda, iyadoo casharo lagu qabtay luuqadda guriga lagu daray Ingiriis, Faransiis, ama Jarmal.
Dugsiyada caalamiga ah ee Switzerland waxay bixiyaan jawi waxbarasho dhaqammo kala duwan ah halkaas oo ardayda ka kala timid daafaha dunida ay isugu yimaadaan si ay wax u bartaan. Haddii ay carruurtaadu hore uga bilaabeen waxbarashadooda waddankaaga hooyo, waxaa laga yaabaa inay ku sii wataan manhaj isku mid ah mid ka mid ah dugsiyada caalamiga ah ee Switzerland ama ay bartaan manhaj caalami ahaan la aqoonsan yahay sida International Baccalaureate (IB).
Tirada fasallada yaryar iyo heerarka xarunta waxbarashada sare waxay astaan ​​u yihiin dugsiyada caalamiga ah ee Switzerland. Barnaamijka IB waxaa sida caadiga ah laga bixiyaa dugsiyadan ama mid ka mid ah afarta barnaamij ee kale ee IB: Sannadaha Hoose, Sannadaha Dhexe, iyo Xirfadda la xiriirta. Dugsiyo badan ayaa sidoo kale bixiya manhajka qaran ee Boqortooyada Midowday (UK) oo u horseedaya Heerka Waxbarashada Sare ee Shahaadada Caalamiga ah (GSCE) iyo GCE A, halka qaarkood ay bixiyaan Dibloomada Dugsiga Sare/Meelaynta Sare (AP), Swiss Matura/Maturite, Abitur Jarmal, iyo Baccalaureate -ka Faransiiska.
Dugsiyo badan oo caalami ah oo ku yaal Switzerland ayaa bixiya isku -darka kor ku xusan iyo dugsiyo yar oo bixiya manhajka qaranka dalkooda, tusaale ahaan, Dugsiga Iswiidhan.
Haddii aad raadinayso iskuulada caalamiga ah ee ugu fiican Switzerland, ha ahaato maalin ama hoy, waxaad ka dhex eegi kartaa ikhtiyaarka hoose si aad ugu hesho taam habboon ilmahaaga. Faahfaahinta mid kasta oo ka mid ah dugsiyadan ayaa sidoo kale la bixiyay, waxaadna heli kartaa macluumaadka aasaasiga ah sida goobta iyo qiimaha guud, luqadaha, tirada ardayda, waxqabadyada manhajka ka baxsan ee ay ardaydu geli karaan, manhajka, iyo waxyaabo kaloo badan.
Dugsiga Caalamiga ah ee Montreux (MIS)
Dugsiga Caalamiga ah ee Copperfield
Dugsiga Caalamiga ah ee Academia
Kulliyadda et Lycee Saint Charles
Kulliyadda Alpin International Beau Soleil
Dugsiga Hull ee Zurich
1. Dugsiga Caalamiga ah ee Montreux (MIS)
MIS waa hal-abuurnimo IB World School iyo iskuulkii ugu horreeyay ee IBCP ee Yurub oo si buuxda loogu heellan yahay siinta waxbarasho diyaar-u-ah nolosha oo diyaar u ah ardayda ka soo jeeda meelo kala duwan. Waa maalin wada-waxbarasho iyo dugsi hoy ah oo ku yaal Avenue de Chillon, Territet, Switzerland, waxaana dhigta arday ka kala socota 30 jinsiyadood.
MIS waxay siisaa IB iyo Barnaamijka la xiriira Xirfadda (CP) ardayda da'doodu u dhaxayso 16-19. Luqadda wax lagu baro waa Ingiriis, afafka qalaadna waa Faransiis, Jarmal, iyo Mandarin. Saamiga ardayga iyo macallinka waa 1 illaa 15 iyo waxqabadyada ka baxsan manhajka waxaa ka mid ah kubbadda cagta, tennis-ka, fasallada doodda, guddiga samafalka, iyo qaar kaloo badan.
Ecole D'Humanite waa mid ka mid ah iskuulada caalamiga ah ee ugu wanaagsan wax wada-barashada ee ku yaal Switzerland oo ku yaal bartamaha Alps-ka Switzerland oo kobciya hal-abuurka waxayna dhiirigelisaa dulqaadka iyo go'aaminta shaqsiyaadka dhallinyarada ah. Waa bulsho kala duwan, firfircoon oo arday ah oo ka kala socda in ka badan 20 dal oo kala duwan oo jira 11 - 20 oo ka diiwaangashan Barnaamijyada Meelaynta Sare (AP), Swiss Maturite, iyo barnaamijyada Dibloomada Dugsiga Sare ee Maraykanka.
Waa dugsi boodhin oo buuxa oo leh tas-hiilaad casri ah iyo goobo waxqabadyada manhajka ka baxsan ayaa loo heli karaa isticmaalka ardayga si kor loogu qaado waxbarashada.
3. Dugsiga Caalamiga ah ee Copperfield
Dugsiga Caalamiga ah ee Copperfield waa mid ka mid ah iskuulada caalamiga ah ee ugu wanaagsan wiilasha ee Switzerland, wuxuu diiwaangeliyaa wiilasha da'doodu tahay 3-18 sano oo leh adeegyo maalinle ah iyo kuwo hoy ah. Waa jawi kala duwan oo ay ardaydu ka kala yimaadeen in ka badan 18 dal iyo saamiga macallinka iyo ardayga ee 1: 2.5.
Fursadaha tacliimeed waa;
Barnaamijka Sanadaha Koowaad ee Baccalaureate waxaa la baraa ardayda da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 12
Cambridge IGSCE waxay baratay ardayda da'doodu u dhaxayso 13 iyo 16
Barnaamijka Dibloomada IB waxaa la baraa ardayda da'doodu u dhaxayso 16 iyo 18.
Ardayda doonaysa inay ku sii socoto nidaamka Ingiriiska waxay iska qori karaan barnaamijyada A-level. Luuqadaha wax lagu baro waa Faransiis iyo Ingiriis iyo barnaamijyada ajnebiga la baray waa Faransiis, Jarmal, Iswidish, Isbaanish, iyo Mandarin. Lacagta waxbaridda waxay u dhexeysaa 30,000 CHF ilaa 40,000 CHF sanadkii.
4. Dugsiga Caalamiga ah ee Academia
Dugsiga Caalamiga ah ee Academia waa mid ka mid ah iskuulada caalamiga ah ee ugu fiican Switzerland, wuxuu ku saleysan yahay Basel wuxuuna bixiyaa barnaamijyada IGCSEs, Cambridge, iyo A-level. Waa dugsi maalinle ah oo qiraya wiilasha iyo gabdhaha da'doodu u dhaxayso 13 ilaa 20 jir. Luuqadaha wax lagu baro waa Ingiriis iyo Jarmal. Isboortiga iyo waxqabadyada kale ee manhajka ka baxsan ayaa la heli karaa.
Kulliyadda et Lycee Saint Charles waa la aasaasay 1897 oo hadda u shaqaysa sidii maalin iyo dugsi boodhin, Kulliyadda et Lycee Saint Charles waa iskuul caalami ah oo wax-barasho ku leh Switzerland oo diiwaangeliya ardayda da'doodu tahay 8 ilaa 19 sano. Waxaa jira arday ka kala socda in ka badan 10 dal iyo macallin ilaa saamiga ardayga waa 1:12. Lacagta waxbaridda sanadlaha ah waxay u dhexeysaa 61,400 CHF ilaa 77,000 CHF.
Saint Charles, manhajka qaranka Switzerland waxaa loo adeegsadaa ardayda dugsiga hoose iyo sare halka labada Swiss Maturite (French / Bilingual French - English) ama manhajka waddada IB loo isticmaalo ardayda dugsiga sare.
6. Kulliyadda Aiglon
Aiglon College waa mid ka mid ah iskuulada caalamiga ah ee Switzerland wax ku bara ardayda da'doodu tahay 9 ilaa 18 luuqadaha Faransiiska iyo Ingiriiska. Waa machad wada-waxbarasho leh oo leh adeegyo maalinle ah oo dhammaystiran. Manhajka halkan waa IB Diploma iyo barnaamijka IGCSE. Waxaa jira ciyaaro iyo waxqabadyo ka baxsan manhajka oo ay ardaydu ku hawlan yihiin sida muusigga, farshaxanka masraxa, kubbadda koleyga, Frisbee, kubbadda koleyga, miiska miiska, squash, iwm.
7. Kulliyadda Malvern Switzerland
Kulliyadda Malvern waa maalin wax-barasho iyo iskuul boodhin ah oo lagu qoro ardayda da'doodu tahay 13-18 sano. Iskuulku wuxuu ku yaal Leysin, Switzerland, wuxuuna ka mid yahay iskuulada caalamiga ah ee Switzerland. Ardaydu waxay ku raaxaystaan ​​waayo -aragnimo tacliimeed oo dhiirrigelin leh oo diiradda saaraya manhajka qaranka Ingiriiska.
Barnaamijyada Malvern waxay diiradda saaraan Pre-iGCSEs, iGSCEs, iyo A-levels. Koorsooyinka diyaarinta jaamacadda ayaa sidoo kale la siiyaa ardayda si loogu diyaariyo nolosha jaamacadda. Lacagta waxbaridda waxay u dhexeysaa 49,995 CHF iyo 59,995 CHF sanadkii.
Kulliyadda Alpin waxay bixisaa waxbarasho dhammaystiran oo dhammaystiran oo leh fursado aan caadi ahayn oo loogu talagalay wiilasha iyo gabdhaha jira 11 ilaa 18 sano. Xerada dhexdeeda, in ka badan 55 jinsiyadood ayaa matala taas oo ka dhigaysa jawi kala duwan oo firfircoon oo kiciya barashada una oggolaanaya ilmahaaga inuu saaxiibo iyo xiriiro ka sameeyo dalal kale.
Manhajku waa barnaamij laba luqoodle ah, manhaj qaran oo Ingiriis ah, Faransiis Brevet, dibloomada dugsiga sare, barnaamijka diblooma ee IB, IGCSE, iyo manhajka sannadaha dhexe ee caalamiga ah (IMYC). Xarumaha dugsiga waxaa ka mid ah hool isboorti, derbi fuulid, filim iyo istuudiyaha muusikada, garoonka kubbadda cagta, shaybaarrada sayniska, suugaanta farshaxanka, iyo qaar kaloo badan. Ardaydu waxay ka qaybgeli karaan waxqabadyo dhowr ah oo ka baxsan manhajka iyo isboortiga sida doodaha, dabaasha, daawashada shimbirta, tennis -ka, kubbadda laliska, baaskiilka buuraha, barafka barafka, iyo qaar kaloo badan.
9. Dugsiga Hull Zurich
Dugsiga Hull ee Zurich waa iskuul waxbarasho (14-19) oo ku yaal Zurich, Switzerland, oo la aasaasay 1945 oo hadda leh in kabadan 20 dhalasho oo ka diiwaangashan barnaamijyadeeda. Waa kulliyaddii ugu horreysay ee Ingiriis ah oo loogu talagalay dhallinyarada ku nool Zurich waxayna ka mid tahay dugsiyada caalamiga ah ee ugu wanaagsan Switzerland. Lacagta wax lagu barto waxay u dhexeysaa 28,200 CHF iyo 29,400 CHF sanadkii.
Luqadda wax lagu baro waa Ingiriis barnaamijyadu waxay daboolayaan Foomamka Shanaad iyo Lixaad ee Boqortooyada Midowday (sannadaha 10 ilaa 13) oo ardayda u diyaarinaya imtixaannada IGCSE iyo A-level.
10. Champittet College
College Champittet waa mid ka mid ah iskuulada caalamiga ah ee ugu fiican Switzerland wuxuuna bixiyaa saddex diblooma; Swiss Maturite, French Baccalaureate, iyo IB, iyo sidoo kale barnaamij laba luqadle ah oo Faransiis-Ingiriis ah. Waa iskuul wax-barasho leh oo leh adeeg maalinle ah, raacitaan buuxa, iyo adeegyo wiig oo toddobaadle ah oo lagu qoro ardayda da'doodu tahay 3 ilaa 18 sano.
Barashada iyo tas -hiilaadka manhajka ka baxsan ayaa diyaar u ah isticmaalka ardayga, sida garoomada kubadda cagta, qolka jimicsiga iyo qolka jimicsiga, shaybaarrada sayniska, qolka muusigga, iyo qaar kaloo badan.
Kuwani waa 10 -ka dugsi sare ee ugu sarreeya Switzerland oo leh tafaasiilkooda oo ku siinaya aragti dheeraad ah oo ku saabsan dugsiga ku habboon ilmahaaga ama waaxda.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Iskuulada Caalamiga ah ee Switzerland
Iskuulada caalamiga ah ee Switzerland ma yihiin lacag la'aan?
In kasta oo dugsiyada caalamiga ah ee dadweynaha ee Switzerland ay lacag la'aan yihiin kuwa gaarka ahi ma aha bilaash.
Switzerland ma leedahay dugsiyo Ingiriis ah?
Haa, Switzerland waxay leedahay dugsiyo Ingiriis ah tanna waxaa ugu wacan tirada ardayda caalamiga ah ee dalka.
Waa imisa iskuulka caalamiga ah ee Switzerland?
Qiimaha ka -qaybgalka dugsi caalami ah oo ku yaal Switzerland wuxuu ku kala duwan yahay arrimo kala duwan sida haddii aad tahay maalin ama arday dhiganaya, haddii aad iska diiwaangelinayso sidii dugsi sare ama arday dugsi hoose, iyo ugu dambayntii dugsiga aad rabto inaad iska qorto. Si kastaba xaalku ha ahaado, filo inaad bixiso qiyaastii CHF24,000 ilaa CHF36,000 sanadkii.
21ka Websaydh ee Koodhadhka ugu Fiican ee Carruurta
Liiska Kulliyadaha Kanada ee Ardayda Caalamiga ah - Top 15
11 Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarshada ee Ireland Ardayda Caalamiga ah
dugsiyada caalamiga ah ee Switzerland
Post Next:13ka Shabakadood ee Waxbarista Ingiriisiga ee Onlineka ah